Sahara Andrefana: Adihevitra mikasika ny sarintanin’i McDonald · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2018 4:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Deutsch, English
Niatrika adihevitra ny sampan'ny McDonald Maraokana tamin'ny herinandro lasa taorian'ny namoahany kilalaon'ankizy “Happy Meal” izay ahitana sarintanin'i Maraoka. Ny sisintany eo amin'ny sarintany dia manasaraka an'i Sahara Andrefana amin'i Maraoka; Faritany ifandiran'i Maraoka sy ny Front Polisario tohanan'ny Alzeriana i Sahara Andrefana. Nifarana ny disadisa tamin'ny Sampana Maraokana namoaka fialantsiny ho an'ny olom-pirenena ao Maraoka.
Goufia, bilaogera am-pielezana monina ao Canada, miantso ny hanaovana ankivy ny McDonald miaraka amin'ireo bilaogera hafa:
Azo jerena ao amin'ny bilaogin'i Sahara Resiste ny lahatsoratra amin'ny teny frantsay sy espaniola momba ny fanaovana ankivy. Azo jerena ato kosa ny sarintanin'ny Firenena Mikambana misy an'i Maraoka sy i Sahara Andrefana.